केही काम नपाएका मान्छेहरु देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका छन् : प्रधानमन्त्री (मन्तव्यको पूर्णपाठ)
सोमबार ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ घुन्सास्थित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वागत गर्दै स्थानीय बालबालिका । तस्बिर : सन्तोष पुर्कुटी/रासस
२०७७ मङ्सिर ८ सोमबार २२:५९:००
खानेपानीको व्यवस्था पनि यहाँ भएको छ । संचार सुविधा आइसकेकोे छ । अनलाइन क्लास चल्नेसमेत स्थिति भएको छ । टुजी सेवालाई छिट्टै फोरजी सेवामा स्तरोन्नति गरी संचालन गर्ने साथीहरुले भन्नुभएको छ । जेहोस् फोरजी सेवा पनि संचालन हुँदैछ । अब यहाँ मोटरेवल बाटोले जोड््ने कुरा टिपताला पास र उता दक्षिणमा... आउँछ । त्यहाँ जोड्ने कार्य भइरहेको छ । चीनतिर पनि बाटो खुलिसकेको छ । यता हाम्रोपट्टि पनि ट्रयाक खोल्न ६ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ, अरु खुलिसकेको छ । यसलाई स्तरोेन्नति गर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम तीन वर्षभित्रै सकिन्छ । त्यसपछि ब्ल्याकड्रप(कालोपत्रे) गर्ने काम हुन्छ । तीन वर्षभित्र यी सुगम ठाउँहरु हुन्छन् ।
भर्खरै मलाई मेरी श्रीमतीले विद्यालयमा छात्रावृत्तिको लागि ५ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भनेर भनेकी छन् । उत्कृष्ट, गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले त्यसबाट छात्रवृत्ति पाउन सक्ून् । यसबाट लगभग त्यसबाट ५ जना बालिका र ५ जना बालक गरी १० जनलाई छात्रावृत्ति दिन सकिन्छ । यो व्यवस्था विद्यालयले मिलाउने काम गरोस् । विद्यालयका पुराना शिक्षकहरु लोकथान प्रसाईं, एलसी गुरुङलाई मैले यहाँ देखिराखेको थिएँ । तपाईंहरु पुराना शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । यहाँहरुले त्यसको समुचित प्रबन्ध गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु । यहाँ हस्पिटल हामीले हे¥यौं, कम्मल रहेनछ । त्यसकारण १० वटा कम्मल उपलब्ध गराउने भनेर मेरी श्रीमतीले भनिदिनू भनेकी छन् । १० वटा ब्लाङकेटहरु यहाँ उपलब्ध गराइनेछ । यी त ससाना कुराहरु भए । व्यक्तिगत रुपमा उनले गर्ने कुराहरु मात्रै भए ।
यहाँ साथीहरुले राख्नुभएका मागहरुको सन्दर्भमा तिपताला नाका खोल्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्नुभएको छ । यो कुरा मैले अघि नै भनेँ, यसमा हामीले ध्यान दिने नै छौं । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई कालोपत्रेमा परिणत गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । त्यो पनि प्रक्रियामै छ । त्यो हुने नै छ । गाउँपालिकामा रहेका एनटिसी टुजी टावरलाई फोरजीमा परिणत गरिदिन भन्नुभएको छ, त्यस सम्बन्धमा पनि काम अगाडि बढिराखेको छ । कञ्चनजंगा बेसक्याम्पको दक्षिणी र उत्तरी मोहडाका क्षेत्रहरुमा अवस्थित पर्यटन पदमार्गमा स्तरोन्नति गरिदिन भन्नुभएको छ । यसलाई पनि ध्यान दिइनेछ । यस पर्यटन पदमार्गलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? पहिले मोटरेवल बाटो आयो भने यसको स्तरोन्नति गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
त्यसकारण मोटरेवल बाटो ल्याउने कुरामा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यसले सबै कुरालाई सजिलो बनाउँदै जानेछ । साथीहरुले अर्को माग गर्नुभएको छ, योे स्पेसल परमिटको अनिवार्यताचाहिँ खारेज गर्नुप¥यो । यस सम्बन्धमा पनि मैले भनिसकें, अबको समयमा यस खालको व्यवस्था धेरै आवश्यक पर्दैन । र, यसलाई खारेज गर्न सकिन्छ । यो उहिलेको जमानाको कुरा हो । अहिले यस्तो अवस्था आवश्यक छैन । लघु जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बृद्धि गरेर खम्बाचेन, ग्याब्ला र अम्जिलासाजस्ता गाउँहरुमा पनि विस्तार गरिदिन भन्नुभएको छ । यो एकदम स्वभाविक र आवश्यक कुरा हो । यसमा हाम्रो ध्यान जानेछ । तपाईंहरुले लेखेर दिनुभएका यी मागहरु लगेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट फरवार्ड गर्ने र के गर्न सकिन्छ ? यो काम हामीले गर्नेछौं ।
हामी यस घुन्सा गाउँलाई पर्वतीय क्षेत्रको एउटा नमूना गाउँका रुपमा पर्यटकीय, पर्वतीय नमूना गाउँका रुपमा विस्तार गर्ने छौं । प्रदेश सरकारले यस बारेमा घोषणा गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीजीले मलाई अघि भन्नुभएको र अस्ति नै याङजुङले पनि भनिसक्नु भएको थियो । यस गाउँलाई एउटा नमूना गाउँका रुपमा विकास गर्ने काम अघि बढसिकेको छ । नमूना गाउँका रुपमा विकास गर्न केके पूर्वाधारहरु चाहिन्छन् अथवा केके आवश्यक कामहरु गर्नुपर्छ, ती कुराहरु हामीले गर्नेछौं । यो नमुना गाउँ हुनको लागि अब यस गाउँमा पढ्न नपाएको कोही बालबालिका, पढ्न नपाएर कोेही निरक्षर भएको वा स्कुल जान नपाएर निरक्षर रहेको वा स्कुल जान नपाएर र पढ्न नपाइरहेको स्थितिमा कोही हुनुहुँदैन ।
कसैले सामान्य, प्रारम्भिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार नपाउने खालको स्थिति हुनुहुँदैन वा मैले अघि नै भनेँ, आधारभूत सेवाहरु पुगेको हुनुपर्दछ । यस कुरामा प्रदेश सरकारको ध्यान जाने नै छ र केन्द्र सरकारबाट पनि हामीले उचित ध्यान दिने नै छौं । घुन्सामा स्थायी स्वास्थ्य चौकी स्थापनाको माग गर्नुभएको छ । यो एउटा स्वास्थ्य चौकी त बनिसकेको नै छ । यसलाई स्तरोन्नति गरेर सवलीकरण गर्दा हुन्छ । यस क्षेत्रको पहिलो बस्ती खम्बाचेनको नापी हुन २०४६ सालमा छुट भएका जग्गाको पुरानो प्रमाणका आधारमा नापजाँच गरी लालपूर्जा उपलब्ध गराउन पनि तपाईंहरुले माग राख्नुभएको छ । त्यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गराइने छ, म तपाईंहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
नेपालमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीय लोेकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्बन्धमा कसैले भ्रम फिजाउनु बेकार छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । हामीले यो लडेर ल्याएका छौं । यसको सुदृढीकरणका लागि, यसको सफल प्रयोगका लागि नै हामी काम गछौं । तसर्थः तपाईंहरु ढुक्क भएर विकासका कामहरुलाई साथ दिन लाग्नुहोस् । हामी देश विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार दत्तचित्त छौं । मलाई काठमाडौं मात्रै बसेँ पनि पुग्थ्यो, यहाँ नआएपनि पुग्थ्यो । अस्ति भर्खर म किमाथाङ्का गएँ । बाटो कस्तो बन्दैछ, कसरी बन्दैछ, के हँुदैँछ ? चीनसँगको त्यो हाम्रो यस्तो अर्को नाका हो, जो धेरै उचाइमा जानुपर्दैन र थोरै उचाइमा सधै चल्नसक्छ । यस्तै २३÷२४ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ ।
त्यति कम उचाइको सधैँ चल्ने बाटो किमाथाङ्का करिडर अरुण नदीको किनारैकिनार बनिरहेको छ । हामी तमोर नदीको किनारैकिनार अर्को बाटो पनि खोल्दै छौं । पश्चिमतिरबाट पनि थुप्रै नाकाहरु खोल्दै छौं । त्यसकारण उत्तरी भेगका गाउँहरु पनि अब दुर्गम होइनन् । चीनदेखि दक्षिणसम्म यी सबै बाटोले जोडिन्छन् र हामी केही वर्षभित्र यी बाटोहरुलाई पक्की बाटोका रुपमा विकास गछौं । यसरी अब देश विकासको बाटोमा अघि बढेको छ । तपाईंहरुले बुनेका गलैँचाहरु अब मान्छेले बोकेर होइन, गाडीले बोकेर बजारसम्म पु¥याउनेछ । केही समय मात्रै हामीले यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । यसरी कामहरु हुँदै गरेको, निर्माण कार्य ेहुँदै गरेको, बाटाका ट्रयाकहरु खोल्दै गरेको तपार्इंहरुले देख्नुभएको छ । बाटोको स्तरोन्नति गरेको पनि तपाईंहरुले देख्नुभएको छ । मैले धेरै भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, देश अगाडि बढ्छ ।
म हाम्रा युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले सही बाटो लिनुपर्दछ । विकासको बाटो लिनुपर्दछ । आआफ््नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने ? कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ ? एउटा नमूना त हाम्रो याङजुङ शेर्पा नै हुनुहुन्छ, जसले यस दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर यस ठाउँको विकासको लागि फाउन्डेसन निर्माण गरेर विभिन्न ढंगले काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ । मलाई आज अलिक माइत आएजस्तोजस्तो पनि लागिरहेको छ । कोेसेली दिएर पठाउन खोजेकोजस्तो देख्छु । तर यो फेरिफेरि आइरहोस् भनेर हो कि के हो ? हामीहरुलाई यस्ता कोसेलीहरु धेरै नदिए राम्रो हुन्थ्यो ! धेरै कोसेली नदिए नै राम्रो हुन्थ्यो ! उता बस्न मन नलागेर फेरिफेरि आइरहुँजस्तो लागिरह्यो भने...! त्यसैले कोसेलीहरु अलि धेरै नदिए हुन्थ्यो । खैर, म सबै साथीहरुलाई धेरैधेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुकोे ल्होसारजस्ता चाडहरुको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।
सबै स्वस्थ रहनुहोस्, उन्नति र प्रगति गर्नुहोेस् । हाम्रा बालबालिकाहरुको पढाइ राम्रो होस् । गुरुबा, गुरुआमाहरुले राम्रो पढाउनुहोस् । राम्रो पढाउन ध्यान दिनुहोला । र, बालबालिका, साना नानीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेहनतसाथ पढेर देशका लागि भविष्यमा केही गर्नुपर्छ । यस्तै दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका मान्छेहरु सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेका हुन्छन्, सङ्घर्ष र कठिनाइ बुझेका हुन्छन् र उनीहरुले देश विकास गर्ने कुरामा झन् ठूलो र झन् धेरै योगदान गर्न सक्छन् । कठिनाइको सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् । तपाईंहरु सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बढ्ने अठोट गर्नुहोस् । अगाडि बढ््न र देश विकास गर्न सम्भव छ । दुर्गमलाई सुगम बनाउन सकिन्छ । दुर्गमको बेग्लै महत्व हुन्छ । सहज बनाएर यसको महत्व यति नजिक हिमाल देखिन्छ, सजिलै यति नजिकैबाट हेर्न सकिन्छ । यो असाधारण सुन्दर कुरा हो । यसलाई हामी आवागमन गर्न सहज बनायौं भने यो पर्यटनको लागि बहुतै राम्रो ठाउँ हुन्छ । यसनिम्ति तपाईंहरुका माग मैले हेरेको छु ।
(ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन)